Mai Chibwe VekwaZimuto: Kuvengana nehama dzemurume/mukadzi
Zvinoitika kuti usvike pamusha ugowana pane ruvengo zvokuti unodzungaira nokugarapo. Pamwe iwe unofunga kuti hapana chawakanganisa saka woshaya kuti ruvengo gwabva kupi. Zvinoita kuti uzame kugarisana zvakanaka nemhuri yako tsva asi wongopedzisira waona kuti hazvisi kuita zvakanaka.
Kusarudza: Pane zvinhu zvakawanda zvinoitisa ruvengo kumuroora. Chokutanga ndechokusarudza kwemwanawavo. Zvinoitika kutimwana wavo kana ange akanyengana noumwe musikana kwenguva, uye ambouya nomusikana iyeye kuzortidza vebereki nehama, Ivo voisa fungwa yavo pakuti ndiye waacharoora. Pozokanganisika zvokuti vanorambana iwe wozonyengwawo hako zvatori zvesecond choice. Kana chikonzero chokurambana chisingabvumiwi pamushha apa iwe unoonekwa sewe warambansa mwana wavo nomusiikana wavanga vachida. Zvese zvaunozoita zvinoshorwa kuitira kuti vagoti uya nyakurambwa ndiye ange ari nani.
Kudzivirira nyaya yakadai, hwisisa mukomana wako kutii ange ane vamwe vasikana vanozikamwa nemhuri yake here, uye akadanana navo kwenguva yakadii. Kozotizve iwe usakasira kungoti apa wasangana nomukomana aka wotoda kurooranna naye, usingazivi mamirire akaita zvinhu mumhuri yake. Ibomira kusvika wanyatsoziva kuti zvinoita here kuti vahu ava dziite hama dzako.
Mimba: Mazuvano kuita mimba usina kuroogwa kuzviitisa chaiko. Cheromunhu anogara kumusha chaiko anokwanisa kundotsvaka makondomu kana kuti mapiritsi okudzivirira mimba. mazuvano hazvichanyanyi kunetsa kutaura nenyaya dzekuvatana nokuti vakachenjera vava kutanga vaenda vese kunotesitwa voudzana kuti vari papi votaridzana magwaro acho, vozoronga yokuvatana. Saka pakutaura ipapo ndipo pamunobvunzana kuti mimba toidzivrira sei. Mobvumirana kuti zvohwimwi. Kana mati makondomu, monoatenga kwaanotengwa moashandisa nomazvo. Kana mati mapiritsi, musikana woenda kwachiremba opiwa otanga kumwa, kopera mwedzi, mozoronga yokuvatana muviri wake wazara mapiritsi.
Kana ukatanga waita mimba mozoroorana zvechimbichimbi, mhuri yomurume inotora nguva vasingakufariri. Iyewomukomana wako iyeye aikukurudzira kubvisa bhurugwa kuti akupinze chombo, ndiye anototanga kukupopotera vamwe vese vasativambozva kuti wava nemimba. Unohwa ava kutoudza hama dzake kuti wakaita mimba kuti agokuroora. Vasikana vakawanda, zvikuru kana achiri mhandara akahi bvisa bhurugwa, anobvunza mukomana uti zvinofaba sei kana akaita mimba, Mukomana wese anoziva kuti kana akaudza musikana kuti anomuroora, bhurugwa rinobviswa. Saka iwe kana wabvisa bhurgwa unenge uchiti zvichafamba sei iwe mapiritsi hauna kumwa, kondomu hapana, mukomana haana kumbovata nomukadzi uku akazara nourume hwakakora. Unozobatwa nehope watova nemimba.
Kungodaroo watozvipinza padambudziko runoita makore kuribvisa. Mukomana anokuvenga asi uku achingoda kukukwira futi. iwe kuti urambe zvonetsa nokuti uri kuda kuwanikwa naye. Hama dzake dzinokuvenga kuti wakatadzira mwana wavo. Ukuwo dzako dzinomuvenga kuti akatadzira mwana wavo. Saka chako hapana.
Zviri nani kuzoita mimba wava pamusha pemurume.
Mari: Kana mukomana ange ari munhu anotambira mari achipa vabereki vake, hazviiti kuti iwe ugosvikapo vagokutambira vakasununguka vachiziva kuti uchada kuvaka musha wako nomwana wavo. Mari chero yakawanda sei, inokuvenganisa nehama dzomurume kusvika vaona kuti une moyo murefu. Zvinotora nguva. Kana iwe uchishandawo, zvinokwanisika kuti kumhuri dzese dziri mbiri munoonekwa sevanhu vane mari yakawanda. Kana mukasazopa hama mari zvoita sokuti munodada.
Mukadzi anonzi anodada kupfuura murume. Nyaya dzemari dzinonetsa kuti ukapa munhu mari, anonotenda umwe munhu. Kwahi "Haa, zvandakaitigwa nomuroora wa Joniseni zvakandifadza zvokuti. Akandiitengera dhirezi, ndokundipa mari yebhazi, ndokunditengera gurosari." Ipapo vari kutaura kudaro imwe hama yawakasangana nayo pamusika hauna kana kumboiti svika kumba.Ruvengo gotanga.
kana waroogwa imboitawonguva uchitaridza unhu, chero mumoyomako uchizva hako kuti hauna unhu. zvokutaura nehama sokunge havasii vanhu vakakosha, hazvifadzii vanhu. Unozvivengesa nemhuri wopedzisira wava wega. Kuva nemari hazvirevi kuti wakakosha kupfuura vasina mari. Ukafanemota yaunodada nayo, ivava vanhu vasina mari ndivo vanokuchema vagosarazve vachirera vana vako pasina mari. Ukagwara, ndivo vanotumira chisikana chemhuri kuzokubikira chichitorovha chikoro.
Mazuvano okuti murume ari Joni iwe wasara pamusha nevabereki vake, zvinonetsa kuti ugare uri munhu akazvibata kusvika murume adzoka. Ukanonoka kudzoka kumba kweshamwari yako vabereki vanofunga kutiwanga wanoona chikomba. Ukaenda kudhorobha ukasiiwa nebhhazi ukavatako, unoona ndondo nazvo. Kubvunzurudzwa kuti wakavatepi uye wakasiiwa sei nebhazi, ndiani akakuona, uye wakadyei. Munhu hwisisawo zvinhu zvinoita kuti vanhu vakufungire zvinhu zvakawanda.
Kungohwikwa uchitaura pafoni nevanhu vasingazikamwi pamusha apa zvinonetsa hana dzavo. Shandisa foni yako zvinoonekwa kururama kwazvo. Kana uri mumba mako hazvinyanyi kunetsa asi kana uri pamusha pevabereki vemurume funga nezvauri kuita. Kana zvikokisi zvabve Joni kumurume hwisisa marongero ekugovana nemhuri. Kungotora wonoviga kuBEDROOM kwako pamusha pane vanhu hazviiti.
Vanhu vakawanda vanononoka kuva pamwe nemhuri yavakaroora/rwa. hausiwe wekutanga kuvengwa. Hausiwee wekupedzisira. Iwe ndiwe unofanira kuziva kuti ndiwe mutsva pano. ndiwe unovaka ushamwari nehama dzako tsva idzi. Hwisisazve kuti zvkakuitpira ndiwe uchadzingwa pano. ukama hwako navo hwakasiyana nehwavo pachavo nomwana wavo.
Posted by Mai E Chibwe at 12:13